हत्केलाका यी ५ शुभ संकेत, मात्रै एउटा संकेतले पनि हुन्छ धन लाभ – NepalajaMedia
January 31, 2021 208
काठमाडौँ । ज्योतिषको एकदम छरितो विद्या मध्यको एक हो हस्तरेखा । हत्केलाका रेखा र हत्केलाको बनावटसँगै अलग अलग चिञ्हको आधारमा व्यक्तिको स्वभाव र भविष्यको जानकारी पनि जान्न सकिन्छ।
उज्जैनका हस्तरेखा विशेषज्ञ डा विनित नागरका अनुसार कुनैपनि व्यक्तिको हत्केला हेरेर यो भन्न सकिन्छ कि उसले धन प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन। हेर्नुहोस् यो धन लाभसँग जोडिएको मूख्य योग।
ध्यान दिनुहोस् पुरुषको दायाँ हात तथा महिलाको बायाँ हात हेर्नुपर्दछ।
१) पहिलो योग-यदि कुनैपनि व्यक्तिको हात भारी र भरी छ । उसका औँलाहरु कोमल र राता देखिन्छन् भने यो धन लाभको शुभ संकेत हो। यस्तो हत्केला भएका मान्छे भाग्यमानी हुन्छन्। यी मानिसले धन सम्बन्धी काममा विशेष उपलब्धी हाँसिल गर्न सक्छन्।
२) दोस्रो योग-यदि कसैको हत्केलामा जीवन रेखा सही गोलाईमा छ, मस्तिष्क रेखा पनि शुभ स्थित छ, त्रिकोणको चिञ्हपनि बनेको देखिन्छ भने यो धन लाभको शुभ संकेत हो। यस्ता मान्छेको समय समयमा अचानक धन लाभ हुन सक्छ। औँठामा जीवन रेखा गोलो बनेको छ भने पनि यो धन लाभ हुने योग हो।
३) तेस्रो योग-हातको माझी औँलाको तल शनि पर्वत र हत्केलाको तल मणिवंध हुन्छ। मणिवंधबाट सुरु भएर शनि पर्वत भएर अन्त जाने रेखालाई भाग्य रेखा भनिन्छ। यो रेखा एकदम स्पष्ट छ भने पनि यो राम्रो संकेत हो। जसबाट समय समयमा धन लाभ हुन सक्छ।
४) चौँथो योग-हत्केलाको साईली औलाको तल्लो शनि पर्वतमा दुई या दुईभन्दा बढि रेखा छ भने पनि यस्ता व्यक्तिलाई धन र सुख मिल्दछ।
५) पाचौँ योग-कुनैपनि व्यक्तिको हत्केलामा शनि पर्वत उठेको छ या जीवन रेखा घुमाउरो खालको छ र कतै टुटेको छैन भने पनि यो योग शुभ मानिन्छ। यसैगरी हत्केलामा अन्य धेरै प्रकारका दोष नभएमा पनि भाग्यमानी मानिन्छ।
Prevयी खानाहरु नियमित खाए सिधै हुन्छ मृगौला ड्यामेज
Nextबिहानी पख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा : घट्यो यस्तो अचम्मको घटना . . .
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा, के के गर्न पाइदैन हेर्नुहोस् सूचना
कहिले लाग्दैछ यो वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण ? तपाईको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
राष्ट्रिय अखण्डताका लागि एकताको गाँठो बलियो बनाउनुपर्छ : पूर्व राजा शाह